टाउकाको चोट (Head Injury) - स्वास्थ्य संसार टाउकाको चोट (Head Injury) - स्वास्थ्य संसार
Home > रोगको बारे > टाउकाको चोट (Head Injury)
basic health health education रोगको बारे
टाउकाको चोट (Head Injury)
टाउकोमा चोट लाग्नु भनेको ३० वर्ष मुनिका मान्छेमा हुने मृत्युको प्रमुख कारण हो । अधिकाँश यस्ता बिरामीहरु पुरुष हुने गर्छन् । मुख्यतः ट्राफिक दुर्घटना या लडाईं झगडा यसको प्रमुख कारण हुन्छन् । अधिकांस चोट सामान्य हुन्छन् र खासै खतरनाक हुन्नन् तर केहि प्रतिशत चोटहरु ज्यानको लागि खतरनाक पनि हुन्छन । शरीरको अन्य भागको चोटको बिपरित टाउकोको चोट बाहिरबाट सामान्य देखिएपनि भित्र खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले शिरको चोटलाई उपेक्षा गर्नु भनेको ज्यानसंग खेल्नु हुनेछ । यही हुनाले टाउकोमा चोट लागेपछि आउने हरेक लक्षणलाई ध्यानपूर्वक हेर्न जरूरी छ ।
कुनैपनि चोट लागेपछि मस्तिष्कमा हुने क्षति दुई प्रकारको हुन्छ:
प्राथमिक क्षति: यस्ता क्षति भनेको सीधा चोटको कारण हुने क्षति हुन् । कपालको चोट, खोपडी टुट्नु , खोपडी भित्र रगत जम्नु, मस्तिष्कको भित्रीचोट , नशाको चोट र रक्तनलीको चोट यसका प्रमुख कारण हुन् ।
द्वितीय क्षति: यस्ता क्षति सीधा मस्तिष्कलाई नभई शरीरको अन्य भागमा लागेको क्षतिको प्रतिकुल असरका कारण मस्तिष्कमा हुने क्षति हुन् । यस्ता क्षति मस्तिष्कमा रक्तप्रवाहको कमिको कारण, मस्तिष्क सुनिनुको कारण , बढ्दो मस्तिष्कको दवावको ( Intracranial Pressure) कारण या संक्रमणको कारण हुने गर्छन् ।
चोट लागेपछि शिरमा हुने बदलावलाई व्याख्या गर्ने प्रमुख सिधान्त हो: मस्तिष्कको कोष्ठ (Cranial cavity) स्थिर हुन्छ जसमा मस्तिष्क, रक्तनली र मस्तिष्कको जल (Cerebrospinal Fluid) हुन्छन् । चोट लागेपछि रगत जम्नाले या मस्तिष्क सुनिनुले कोष्ठको जलीय दवाव (Intracranial Pressure) बढ्छ जसले गर्दा नशा तथा मस्तिष्कको अन्य भागमा दवाव बढ्छ । यदी यो दवाव कायम रहे उक्त ठाउँको रक्तप्रवाहमा कमी आउँछ र अन्तमा त्यहाँ स्थायी क्षति हुन्छ । उक्त दवाव कम गर्न जति ढिलाई हुन्छ मस्तिष्कमा उति नै बढी क्षति हुन्छ । त्यसैले शिरमा चोट लागेको मान्छेलाई तुरुन्त चिकित्षककहाँ लैजान जरुरी हुन्छ ।
कुनैपनि चोटलागेपछी मस्तिष्कमा चोट लागेको या नलागेको थाहा पाउन निम्न संकेतहरु हेर्न जरुरी छ:
उल्टीको मन हुनु
देख्नमा कठिनाई हुनु
चक्कर आउनु ।
यी मध्ये कुनै पनि एक लक्षण छ भने मस्तिष्कमा चोट लागेको मान्नु पर्छ र तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा लानु जरुरी छ । शिरमा चोट लागेको मान्छेको प्राथमिक आकलन गर्न ग्लासगो कोमा स्केल(glassgow coma scale: G.C.S.) प्रयोग गरिन्छ । यसमा बिरामीको आँखाको चाल, बोली र शरीरको चालको मुल्यांकन गरी ३ देखि १५ सम्मको जी.सी.एस. प्राप्तांक दिईन्छ । यदि प्राप्तांक १३ भन्दा कम भए सी. टि. स्क्यान गर्न जरुरी हुन्छ । यदि खोपडीमा टुट छ, जी. सी. एस.मा ४ घण्टासम्म सुधार आएको छैन या स्नायु सम्बन्धित लक्षण छ भने पनि सी. टि. स्क्यान गर्न जरुरी हुन्छ । बिरामीको व्यवहारमा परिवर्तन आए, मुर्छा पर्ने शरीर काम्ने भएमा लामो समयसम्म टाउको दुखेमा पनि सी. टि. स्क्यान गर्न जरुरी हुन्छ ।यदि सी. टि. स्क्यानमा मस्तिष्कको कोष्ठको जलीय दवाव बढेको संकेत आए तुरुन्त अप्रेशन गर्नु जरुरी हुन्छ । भित्र रक्त जाम भए यसलाई निकाली रक्तनलीको छिद्र बन्द गरिन्छ । यदी मस्तिष्क सुन्निएको छ भने खोपडीको हड्डी अस्थायी रुपमा निकाली पेटमा राखिन्छ जसले गर्दा मस्तिष्कको दवाव कम हुन्छ । यति हुँदा पनि कतिपय चोटहरुको कुनै उपचार हुँदैन । नशाको चोटको कुनै उपचार हुँदैन जुन स्थायी पनि हुन सक्छ या केहि समयपछी आफै ठीक पनि हुन सक्छ । यदि मस्तिष्कको कुनै भागमा स्थायी क्षति भैसकेको छ भने बिरामीले पुरै जीवन उक्त भागको स्नायुशक्तिको अभावसंग बिताउनु पर्नेछ । चोट निकै गम्भीर छ भने बिरामीले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु पर्न सक्नेछ ।
Item Reviewed: टाउकाको चोट (Head Injury) Rating:5Reviewed By: Unknown